Ubuntu 12.04 ga-abụ LTS maka afọ 5 | Site na Linux
Ubuntu 12.04 ga-abụ LTS maka afọ 5
Nke a mara ọkwa Jane silber, Onye isi oche Canonical mediante Twitter a kwadokwa okwu ya site na edemede na Canonical blog.
Jane dere, sị: "Site na ọchịchọ a na-ewu ewu, #Ubuntu LTS maka 5 yrs na desktọọpụ" ma ọ bụ n'ezie na ndị magburu onwe ozi ọma n'ihi na "anụ" ọrụ nke Ubuntu. Echere m na ọ bụ mkpebi amamihe dị na ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị na-eche maka nrụpụta akụrụngwa na obere, Ọkara na Companlọ Ọrụ Nnukwu.
Echiche m: Ubuntu kwesiri inwe Debian, alaka ulo oru (LTS) na ulo oru nyocha, nke puru ibu ihe zuru oke Rolling Hapụ. Ma ọ dịghị ihe ọ bụla, Deede Mark na ụmụ ya nwoke na-ekpebi ihe ga-abụ ọdịnihu nke nkesa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ubuntu 12.04 ga-abụ LTS maka afọ 5
Great news, Achọrọ m ịnọ na-esote LTS ruo nwa oge 🙂
Ọ dọọrọ uche m na ọ bụ oge nke abụọ ị kwuru otu okwu ahụ ebe ọ bụ na enwere m echiche na ọ bụghị nke ahụ, amalitere m inyocha isiokwu blog kachasị ọhụrụ iji tinye nke a n'ule ma ị maara ihe m hụrụ ke akpatre 50 post?
Ubuntu na Unitydị n'otu 9
Gnome 3, Gnome-shei 4
Ọnụ, ngwaọrụ, ngwa, usoro, nkuzi, ngwa, wdg. (distro ọ bụla na ọ dịghị otu oge) 16
Minority Distros (nke kachasị elu iri nke distrowatch) 2
Ozi banyere nro na teknụzụ n'ozuzu 3
Nkwupụta echiche 2
Yabụ Ubuntu-Unitydị n'Otu 9, ọ bụghị Ubuntu dị n'otu 41.
M na-ahapụrụ ọrụ ahụ ka Elav na KZKG to Gaara mee ka nkọwa zuru oke na nke ukwuu gbasara isiokwu blog ha.
Mgbe ajọ mbunobi gabigara nghọta na-enweghị isi ma mechaa nyochaa ozi na-ezighi ezi, ọdịiche dị n'etiti ụkpụrụ dị adị na ụkpụrụ echiche efu na-efukarị.
Echere m na ọ naghị ewere dị ka a ga - asị na m na - anwa ịgbachitere Ubuntu ma ọ bụ blọọgụ ahụ, n'ihi na nke ahụ abụghị nzube m, echere m na mgbe Eduar2 kwuru ihe karịrị otu oge na:
na-atụ aro na ọ bụ naanị ma ọ bụ n'ozuzu naanị ihe ha na-ekwu maka na blog, nke m gbalịrị igosi abụghị.
Ezigbo Eduar m. Ọ baghị uru n ’ugboro ole ị ga - echetara anyị 😛
Ọ bụghị ihe dị oke mkpa, ebe a anyị na-anwa ịdebe isiokwu banyere ọtụtụ ihe n'ụwa nke GNU / Linux, mana karịa ihe niile, ebumnuche nke <° Linux bụ ịnyefe ihe ọmụma na ahụmịhe anyị kwa ụbọchị. Mụ onwe m na-achọ mgbe ụfọdụ ikpuchi ihe niile, mana kwenyere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, enweghị akụrụngwa na-egbochi m ịme ya na m ga-enye gị ihe atụ dị mfe.
Ọ ga-amasị m ịme Nyocha banyere ọgba aghara ọ bụla dị, mana enweghị m ike ị maara. Maka ihe dị mkpa achọrọ: Intanet. Ọbụghị naanị na enweghị m ịnweta nkesa / ftps / enyo niile, mana, ọbụlagodi na m mere ya, bandwidth anaghị enye m ohere ibudata ha niile na mgbakwunye na nke ahụ, jiri ebe nchekwa ha.
Mana a na m agwa gị karịa. N'ebe a, anyị na-ebipụta (ma ga-ebipụta) isiokwu ndị anyị nwere mmasị maka The Community in General. Ọ bụghị nzube anyị imeju naanị otu obere ndị ọrụ.
Ebumnuche nke <° Linux bụ dethrone MuyLinux na ihe ọmụma anyị na ahụmịhe kwa ụbọchị dị ka ndị gbara ọchịchịrị
Ya mere, ka mma HAHAHA
Hahaha n'ezie, ihe na-adakwasị gị…. Ọ dịghị ma ọlị, mmadụ, ebumnuche anyị abụghị ịsọ mpi na onye ọ bụla, naanị iji zipu ihe ọmụma, soro ndị ọrụ dị ebube (dịka gị, oge ụfọdụ) wee mepụta Community of friends gburugburu <° Linux
Dethrone ha? Maka nke ahụ ọ ga-adị mkpa na ha ga-anọ n’elu ikpo okwu ma ọ bụ na ha anọghị? LOL !!!
Achọrọ m saịtị dịka WebUp8, OmgUbuntu, na blọọgụ ndị nrụpụta nke onwe, amaghị m, na MuyLinux ahụrụ m akụkọ na-adịbeghị anya, mana ha anaghị "anata m".
Dịka ị si kwuo, ọ bụ saịtị iberibe, dịka mụ onwe m, akpọrọ m ibe ahụ asị
Eeh… anyi na etinye otutu ederede Ubuntu nke oma? LOL !!!!
Ezigbo echiche, m ga-esi na Ubuntu pụọ maka nkwado nkwado, na-enwe afọ ojuju na mbipute m mana ọfụma, m ga-agbanwe.
Ezigbo ozi ọma n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị nwere mmasị ịnwe sistemụ kwụsiri ike maka ezigbo oge 😉
Ọ bụ ya mere m ji nwee Debian. Ọ bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ enweghị m ngwugwu ọhụụ dịka Ubuntu, mana mgbe m mere, ha na-arụ ọrụ dị ukwuu.
Ọ bụ na ịhapụ mpịpụta ka mma? Anyị na-aga wee kwụsị ọtụtụ nzuzu kwa ọnwa isii. na ha na-atụba nnwere onwe ịhapụ ihe ọ bụla na LTS, maka ụlọ ọrụ (anyị ga-ahụ ndị: D) Nke a ka mma ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịga n'ihu na aha anụmanụ, mgbe ahụ kwa ọnwa isii ha wepụtara CD emelitere. / DVD nke onyonyo nke Rolling Hapụ yabụ na ha nwere maka ịzụ ahịa. Na obi ụtọ niile dị ka ikpuru.
Maraworị na Maazị Ernesto nke aha ya bụ elav nwere ike ịsa ahụ na sọlfọ sulfur tupu ya etinye ntụgharị.
Mana ihe ị na-ekwu dị mma, distro nke nwere nke ahụ bụ Frugalware, nke nwere ngalaba dị ugbu a nke na-agagharị na Stable nke na-agba ịnyịnya ígwè
Eeeeeeeeerrooooorrrr !!! More versionitis karịa m ma ọ bụ KZKG ^ Gaara nwere, na mgbe o jiri Ubuntu kwuo na ọ bụrụ na nkwụsi ike, na ọ bụrụ na ihe na-arụ ọrụ ... agbanyeghị. Ọ bụrụ na Debian na-agbapụ agbapụta, m ka ga-eji ya. Naanị ka ịmara, anaghị m eji Arch maka ihe 2:
1- M hụrụ n'anya Debian m.
2- Enweghị m ike imelite nchịkọta ịntanetị kwa ụbọchị
elav onye obula ma na ikpu archlinux na ihuru Ubuntu n'anya, agbaliala iji mkpisi aka kpuchie anyanwu.
Nope, i mehiere Eduardito .. Akpọghị m asị ọ bụla distro na m hụrụ naanị otu n'anya: Debian.
Enweela m gị nhọrọ iji soro Alejandro gagharịa ịgwa gị uru niile nke Arch Linux ka ị na-emelite haha ​​n'elu nke anyị nyere gị aka ... haha
Echere m na site na nke ahụ, ha ga-achọ dethrone Hasecorp ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụghị na enweghị m ike ịkọwa ya, ma ọ bụ n'ihi na Mr. Shuttlegates achọpụtala na ọ na-efunahụ ego
Echere m na ị ghọtara na nkesa kwa ọnwa isii, yana LTS na-akwado 6 ọ bụla, abụghị ezigbo ntụkwasị obi maka ụlọ ọrụ, ebe ọ na-adịghị mkpa ịwụnye oge ọ bụla Ubuntu ọhụrụ pụtara.
@Trece: Anaghị m ewere ihe ị kwuru na-ezighi ezi, ọ dị na ọnọdụ troll, ọ bụ ezie na ị gaghị ekwu na ị naghị agbachitere Ubuntu, ọ bụrụ na anyị niile maara na ọ bụ distro kachasị amasị gị. (ọ ka na-troll mode on).
Ma ọ bụrụ na ọ bụ <° Ubuntu, n'ihi na nzuzu ọ bụla ha si na Ubuntu pum pụta, ha na-ebipụta ya, obere oge nke a ga-abụ otu ihe ahụ dị ka Linux, na ọ bụrụ na Mark Shuttleworth tụbara peo (flatulence) ị hụrụ ya nke mbu site <° Ubuntu.
Agbanyeghi na ekwenyere m na ihe mbu m kwuru banyere isiokwu a bụ naanị ka m daa mba, n'ihi na nke a bụ akụkọ akụkọ, ka anyị kwuo pụta ìhè, gbasara distro Africa. Adịghị amasị egwu ndị ọzọ dịka: Ubuntu xx ga - akpọ Masturbating Monkey, ma ọ bụ ihe ndị yiri ya maka Chukwu!
Ebee ka o kwuru: "Ọ dị na ọnọdụ egwu na", ọ pụtara na ọ nọ na ọnọdụ troll na.
(ọ ka na-troll mode on). Achọrọ m ịsị na anọghị m ebe a.
Jo na m na -abili, m na peel onwe m si n'elu na ala. Echere m na aghọtaghị m ihe ndị ahụ, ọ bụ m, ọ bụghị iri na atọ.
I kwuru ya, ọ bụ naanị na ị gbanwere ọnọdụ "troll" ahụ, echekwara m na nke ahụ emetụtaghị onye ọ bụla. Enwere m ekele maka nzaghachi nye echiche m banyere nke ahụ, mgbe m gụrụ: «<° Ubuntu": Achọpụtara m na ọ bụ ezighi ezi ma ọ bụrụ na atụlere isiokwu nke isiokwu a na blọgụ a na ugboro ole ọ bụla n'ime ha.
Mazi Iri na ato, i nwere ihe ozo ikwesiri iga na RAE.
Ikwesiri ma kelee maka nkọwa a, m gaara ekwu "daalụ."
Obi ike ị metụrụ nsen ahụ na RAE 😀 Ikwesịrị nke ọma ọnọdụ nke ọnụ ọgụgụ atọ.
HAHAHAHA, onweghi onye obula… ochichi nke Troll No.1 enweela mmeri tupu anyi ebido na RAE nzuzu LOL !!!
Haha bụ na m na-agagharịkarị ndị mmadụ na Tuenti na-ede ihe dịka "nwa nwoke" ma ọ bụ "benga", ndị mmadụ nọ na guitarist forums na-ekwu "mgbagọ" ma ọ bụ ozugbo ndị bịara ọhụrụ Linux na nkebi ahịrịokwu ha Hoygan "HOYGAN AS INTALO MESENLLER ENE L UBUNTO ME URJES MUXO GRASIAS DE ANTEBRASO »
Batman ugbu a ị ga-emetụ aka na oge kwa oge
Na-emegharị aka na Enwe hahahahahajajajajjaja
Hahahaha enwetara m….
N'ihe m maara, ọ dịghị ihe ọ bụla si na mkpịsị aka m pụta banyere Ubuntu dị ka ndị ị na-ekwu… Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla, biko mee ka m mara.
Asi m gwa gi haha
Ha ga-apụta, oge ruo n'oge hahaha
M na-ezo aka na nzuzu ndị na-abaghị uru dị ka nke a: https://blog.desdelinux.net/ubuntu-12-04-se-llamara/
Ee sir, nnukwu Zas n'ọnụ niile
Teknụzụ: Ọrụ Spotify na-abịa Blackberry
Anyị na-ahụ nsonaazụ nke ọdịda